IJable Suites 1, Amafulethi aneJacuzzi yangasese phansi.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Natalia
IJABLE SUITES, inxanxathela enhle yamafulethi amasha ayi-6 atholakala enhliziyweni yeCorralejo nje imizuzu embalwa ukusuka emabhishi aleli dolobha elihle laseCanada. Amafulethi azimele ngokuphelele, idizayini, ahlotshiswe futhi anikezwe ngokucophelela okukhulu kucatshangelwa ngisho nemininingwane emincane, ifulethi ngalinye linethala eliyimfihlo eline-jacuzzi eshisayo ebabazekayo, ifenisha yangaphandle nama-hammocks. Ngaphandle kokungabaza, indawo yephupho yeholide elingenakulibaleka.
4.86(7 okushiwo abanye)
I-Corralejo, enezinga lokushisa elikahle cishe unyaka wonke, ibonakala ngokuba nesimo sezulu esifudumele, esinamazinga okushisa asukela ku-21ºC kuya ku-27ºC nokuthi ebusika awavamile ukwehla aze afike ku-11ºC. Itholakala enyakatho yesiqhingi saseFuerteventura, iyindawo ekahle yamaholide omndeni kanye nesilungiselelo esihle sokuntweza, ukuntweza emoyeni, ukutshuza noma ukudoba. Izindawo zayo ezimangalisayo zemvelaphi yentaba-mlilo zikhanga kakhulu, uma ufuna ungahamba ezindleleni namapaki emvelo anjengokuthi; i-Isla de Lobos enhle.
Itholakala noma nini lapho usidinga.
UNatalia Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VV-35-2-0004174